Mizani : Vokatra vaovao l’Oréal, mikolo ny volo ngita, bouclé sy frisé
Safidio ny “serviettes hygièniques” mety aminao
Tsy afa-miala amintsika vehivavy ny fiarovana ilaina amin’ny fadimbolana. Raha ny eto amintsika manokana dia ny “serviettes hygièniques” no tena mbola be mpisafidy. Mifanaraka amin’ny toe-batan’ny vehivavy tsirairay avy ny fisafidianana azy ireny. Ao amin’ny www.ketrika.com di a ahitana karazana “serviettes hygièniques” mety amin’ny vehivavy tsirairay avy.
Mety aminareo ve raha mba mivoaka miaraka amin’ny namany madama?
Mbola misy ve ny lehilahy sarotiny ny amin’ny fivoahan’ny vadiny miaraka amin’ireo namany?
Mbola hatramin’ny 25 mey ho avy izao no hanarahinao ny
Gamme an’ny marika l’Oréal professionnel izay hikarakarana manokana ny volo ngita, bouclé sy frisé ny Mizani.
Tena manamandina ifotony izy io, manalefaka tanteraka ny volo, mitsabo sy manasitrana ny volo simba sy mampitony ny hodi-doha ihany koa. Misy karazany maromaro izy ity ka ny “soins thermasmouth” sy “soins scalp care” no entina aminao anio.
Ny « soins thermasmouth » dia natao ho an’ireo te hanatsotra volo nefa tsy te hampiasa singa sy akora simika. Manatsara sy mampitana ny volo natao “lissage” izy io no mampitana ny volo natao “brushing” ihany koa. Ny “scalpe care” indray dia natao hitsaboana ny hodi-doha manana olana amin’ny angadrano na diso mitera-menaka sy mangidihidy.
Ny Centre de Beaute Luminelle Behoririka sy Avance center dia mikarakara « Journee l’Oréal » ny sabotsy 15 Desambra izao. Fihenam-bidy, andrana, fanoroana hevitra momba ny vokatra l’Oréal no hatao amin’io. Efaka mahazo fanazavana fanampiny amin’ny fiantsoana ny 0340181659 na ny 0331185998.